Ọmarịcha ọrụ - AOOD Technology Limited
AOOD na -agba mbọ ịnye ndị ahịa anyị ọrụ kacha mma. Anyị na-ekere òkè nke ọma na ọkwa mbụ nke ndị ahịa anyị, na-atụle nke ọma sistemụ akara dị iche iche na ahịrị ike, ohere, nrụnye, gburugburu ebe obibi na ihe achọrọ, na-enye ha ndụmọdụ ndị ọkachamara ma nyere ha aka ịchọta ngwanrọ ngagharị ngagharị kachasị mma-mgbanaka mgbanaka.
Nzaghachi ngwa ngwa bụ ihe achọrọ maka onye na -ere ahịa AOOD ọ bụla. Anyị na -edobe ndị ahịa anyị 24/7 ma hụ na enwere ike idozi ajụjụ / mkpa ha n'oge kacha nso. Mgbe enwere igbu oge n'ichepụta ihe, anyị na -eme ka ndị ahịa anyị mara n'oge.
Anyị nwekwara ezigbo akwụkwọ ikike yana amụma azụmaahịa ka ị hụ na enwere ike idozi nsogbu ndị a na-atụghị anya ya ozugbo enwere ike. Ọnụ ahịa dị mma, ịdị elu dị elu na ọrụ na -agbanwe agbanwe bụ ihe AOOD ga -enye ndị ahịa anyị.